Mmekpa ahụ nkịtị n'ihi ndị agadi dara | Ngwọta OMG
Ọrịa na-emekarị n'ihi ndị agadi dara
Mmiri bụ ihe kachasị akpata mmerụ ahụ n'etiti ndị agadi na ihe kacha mkpa maka ịbanye n'ụlọ ọgwụ maka trauma. Ọganihu dị elu na-eme ka enwere ike ịga n'ụlọ ọgwụ mgbe ọdịda. Ihe ndekọ akụkọ maka 88% nke ọkpụkpụ niile n'etiti ndị agadi 60 ma ọ bụ karịa.
Dika ụbụrụ na-etolite, ya dura na-agbanye aka na okpokoro isi, nke na-eme ka epidural (extradural) haematomas na-adịkarị. Mmetụta ụbụrụ nke ụbụrụ na - aga n'ihu na - eduga n'ọtụtụ dị gburugburu ụbụrụ nke a na - eche na ọ ga - echebe ya pụọ ​​n'ọgba aghara, mana ọ na - eme ka haematomas dị ala karịa. Ndị ọrịa karịrị afọ 55 bụ ndị a na-akwado ya na-enwe ọganihu dị elu nke ọnyá isi, na-emerụ ahụ nke ukwuu ma na-arị elu. Ọbụna isi nrịanrịa dị nro, karịsịa ndị nwere ọrịa na-enwekọ ụbụrụ, nwere ike ịkpata mmebi ahụ na-adịgide adịgide. Ọ bụrụ na e nwere okpukpu isi okpokoro isi na hemiparesis dị na ya, a ghaghị ịmalite ọgwụ heracoma intracranial traumatic ma ọ bụghị ọrịa strok. N'otu aka ahụ, mgbagwoju anya nke karịrị 12 awa mgbe o merụsịrị mmerụ ahụ, ọbụna na onye ọrịa na-enweghị okpukpu isi, bụ ihe ngosi maka nyocha CT. Ọrịa ọ bụla chọrọ ime ihe ozugbo na CT scan ga-enwetara na ndị ọrịa niile na-amaghị ihe karịa 5 nkeji mgbe ha merụsịrị mmerụ ahụ. Ihe ga - esi na ya pụta bụ ndị dara ogbenye na ndị agadi nwere nhụjuanya n'isi iji mee ngwa ngwa na-aga n'ihu mgbe a dichasịrị hypoxia na hypovolaemia. Achọghị ịgwọ ọrịa na-adịghị mkpa maka ọtụtụ ndị ọrịa a.
Ọkpụkpụ ụbụrụ na-emekarị ka ọbụna ihe dị njọ na-adọrọ adọrọ n'ime obi ndị agadi. Ọnụnọ nke ọnya mgbajiri agbaji na X-ray bụ ihe dị mkpa na-egosi nhụjuanya na nhụpụta, dịka ọnwụ na-aba ụba na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ụbụrụ. Ebe ọ bụ na a naghị anabata ha, a ghaghị ilebara ndị ọrịa a anya nke ọma na ọ dị mkpa maka ikuku ventilation ugboro ugboro. Ndị na-enwe nsogbu obi mgbawa dị njọ karị, dịka ndị nwere mmerụ ahụ, na-achịkwa n'otu ụzọ ahụ dị ka ndị na-eto eto.
A ghaghi icheta na ndi agadi enweghi ihe ndi choro na ihe ndi di nkpa. Ya mere nchoputa nke ha choro echiche nke ngwa ngwa na ihe di omimi nke acumen. Ndị nwere akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ na-egosi na ịwa ahụ abdominal mbụ ga-ebu ụzọ kwesịrị inwe CT ma ọ bụ ultrasound scan nke afọ kama ịchọta ọnya mmiri.
Na ndị agadi nke nwere ọtụtụ mmerụ ahụ, a ghaghị idozi nkwarụ iji nye ohere na njem dị mma, ma maka nlekọta ozugbo na nhazigharị ọzọ. Ọ bụ ezie na a na-achịkwa ihe ndị dịpụrụ adịpụ nke ọdụm na-emegharị ahụ, ọ dịghị ebumnuche nke njikwa dị otú ahụ na onye ọrịa nwere mmerụ ụkwụ nke ga-achọ iji ogwe ụkwụ ma ọ bụ mkpara maka nchịkọta. Ebumnuche nke ọgwụgwọ kwesịrị ịmalite ịmalite ime mkparịta ụka, usoro kachasị mkpa iji mee ka ndị nchịkọta oge mbido ozugbo nsogbu ndị ọzọ kwere. Nkwụsi ike na nkwupụta nke na-agafe agafe nwere ike ịkpachapụ anya na ọ ga-arụpụta ọrụ.
Mgbakasị ụkwụ bụ nsogbu na-arịwanye elu na Europe. Na United Kingdom na ndị ọrịa 70,000 na-ata ahụhụ ụbụrụ kwa afọ na-amụba na mkpokọta 5% kwa afọ ma na-ebute 120,000 ikpe kwa afọ site na 2015. Ọkara iri asaa na ise nke ndị ọrịa karịrị 75 afọ ma 80% bụ nwanyị. Ọnụ ọgụgụ dị ogologo nke ịnọ n'ụlọ ọgwụ bụ ụbọchị 30, nke nwere ọnụọgụ ụbọchị 30 banyere 10%. Ihe nkedo ahihia maka 20% nke odide anumanu a nile. Enwere ugbu a ọtụtụ aro maka 'omume kachasị mma' maka nchịkwa nke ụba a na-arịwanye elu na nlekọta ahụ ike. Ndị na-esonụ na-adabere n'Ịntanet Intanet na Intercollegiate Guidelines Network.
Ndị agadi nwere okenye na-enwe ọnụ ọgụgụ dị elu nke ọnwụ mmadụ ma bụrụ ndị na-adịghị mma karịa nchịkwa kachasị mma. Usoro nlekọta trauma ga-adị njikere ịnagide ìgwè a nke ndị ọrịa na mkpa ha pụrụ iche. Ndị agha ahụ kwesịrị ịmara mgbanwe mgbanwe ahụ na mgbatị ahụ na-esonyere ịka nká na otu ihe ndị a, tinyere mmetụta nke ọrịa na-aṅụkọ na ọgwụ, na-achọ ihe pụrụ iche na nkà ha. Nghọta na enweghị uche na nchịkọta mbụ nke ndị ọrịa nwere ike inwe nnukwu nsogbu ọ bụla na mgbake na ọpụpụ ụlọ ọgwụ. A ghaghị ịmara ndị agadi okenye banyere ihe na-eme ma, ebe o kwere mee, ka a gbaa gị ume isonye na mkpebi nyocha. Ọ bụghị ndị agadi niile na-agbagha. Nke a apụtaghị na ha kwesịrị ịnata ụdị ọgwụgwọ ahụ maka ndị na-eto eto; kama nke ahụ, a ghaghị ijikwa ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị maka mkpa ha na ìhè nke ihe ga-esi na ya pụta.
Nzuzo 8558 5 Echiche Taa